April 8, 2021 - Padaethar
ကောင်လေးတစ်ယောက် ကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားလာဖို့ ကြူနည်းများ
ကောင်လေးတစ်ယောက် ကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားလာဖို့ ကြူနည်းများ သင်က သူနဲ့ အီစီကလီ စကားလေးတွေ ပြောချင်ပေမယ့် ဘယ်လို ပြောရမှန်း မသိ၊ ဘယ်လိုကြူရမလဲ မသိဘူး ဆိုရင်တော့ တခြားသူတွေဆီက အကြံဉာဏ်တွေ ကို လိုအပ်လာပါပြီ။ သင်လိုအပ်တဲ့ အကြံဉာဏ်တွေကို အခု ပြောပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကနေ ရယူနိုင်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းတွေအတိုင်း ကြူမယ်ဆိုရင်တော့ သင်လိုချင်တဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို သူ့ဆီက ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်- ၁။ သူနဲ့ စကားပြောတဲ့အချိန် သူနဲ့ စကားများများ ပြောဖြစ်တဲ့ ရက်တွေဆိုရင် အကြာကြီး စာမပြန်ဘဲ ချေထားတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒီလို ချေနေတာကြောင့် ကြူရတဲ့ အဓိက လိုရင်းကို မရောက်တော့ပါဘူး။ Message ကို အကြာကြီး Seen မပြဘဲ … Read more
Categories KNOWLEDGE, အချစ်ရေး Leaveacomment
Categories KNOWLEDGE, အထွေထွေဗဟုသုတ Leaveacomment
သင်ချစ်တာထက် ပိုချစ်တဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားရင် ဒါမျိုးတွေကြုံရမှာပါ
သင်ချစ်တာထက် ပိုချစ်တဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားရင် ဒါမျိုးတွေကြုံရမှာပါ လူတိုင်းက ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ အချစ်ဆုံးတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ကြတာ ချည်းပါပဲ။ ချစ်သူနှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က အမြဲတမ်း ပိုချစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကလည်း ချစ်သူတွေကို အမြဲတမ်းနှိပ်စက်လို့ နေတတ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီအတွေးတွေက သင့်ကိုလည်း ဖိစီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ကလည်း သင်တို့ချစ်သူနှစ်ယောက်မှာဘယ်သူကပိုချစ်လဲ ဆိုတာကို သိချင်နေမှာပေါ့။ ဒါဆို သင့်ချစ်သူက၊ သင်သူ့ကိုချစ်တာထက်ပိုတဲ့ အချစ်တွေနဲ့ ချစ်နေမှန်း ဒီအချက်တွေကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ် ။ (၁) သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားက ပြဿနာတွေကို မကြီးထွားစေဘူး” အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ချစ်သူနှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်တဲ့အခါ သူဟာ ပြဿနာတွေပိုကြီးထွားစေမယ့်စကားတွေ မပြောတတ်သလို၊ ပြဿနာပိုကြီးမယ့် လုပ်ရပ်တွေလည်း မလုပ်ပါဘူး။ အဲ့ဒါက သူဟာပြဿနာဖြစ်မှာကို ကြောက်တာထက် သင်နဲ့သူ့ကြားမှာ အဲ့ဒီလို ပြဿနာတွေဖြစ်တာကို မလိုလားလို့ ၊ မကြိုက်လို့ပဲ … Read more
ယောက်ျားလေး များ ယူသင့်သော မိန်းမ (၁၀) မျိုး
ယောက်ျားလေး များ ယူသင့်သော မိန်းမ (၁၀) မျိုး (၁). အနာရောဂါကင်းရှင်းပြီး အနေအထိုင်သိမ်မွေ့ သန့်ရှင်းသော မိန်းမ (၂). မိဘ အား ပြုစုလုပ်ကျွေးလိုစိတ်ရှိပြီး ကိုယ့်ထက်အကြီးများအား လေးစားစွာ ဆက်ဆံတတ်ပြီး ကိုယ့်ထက် အငယ်များအား အရာရာနားလည် ထိန်းကျောင်းပေးတတ်သော မိန်းမ (၃). ပုံမှန်အားဖြင့် ယောကျာ်း ဆို စိတ်မဝင်စားတတ်..ကိုယ်နဲ့တွေ့မှ အိမ်ထောင်ပြု ခြင်း လက်ထပ်ခြင်း အမှုကို စဉ်းစားဖြစ်သော မိန်းမ (၄). အရာရာကို လွယ်လွယ် မယုံ ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ကာ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်တတ်သော မိန်းမ ထိုအသိဉာဏ် အတွေ့အကြုံ လောကအမြင်များကိုလဲသားသမီး များအား သွန်သင် လမ်းညွှန်ပြနိုင်သော မိန်းမ (၅). ဟိုးအောက်ဆုံးအဆင့်ကနေ ..ဟိုးအမြင့်ဆုံးအထိ ..ယောကျာ်းဖြစ်သူရဲ့ အလုပ်အကိုင် အဆင့်အတန်း ရာထူး … Read more
သင်ဟာ သူများထက် ထူးခြားသူ ဖြစ်ကြောင်း ဒီအချက်တွေက ပြသနေပါတယ် လူတိုင်းမှာ အစွမ်းအစ ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။ ဒါကို သင်ကိုယ်တိုင်က သတိမပြုမိသလို ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရှုံ့ချဝေဖန်တဲ့ စကားသံတွေ အောက်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သင့်မှာအောင်မြင်အောင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိနေပြီးသားပါ။ ကိုယ့်မှာ ကိန်းအောင်းနေတာတွေကို သတိမထားမိသေးတာပါ။ ဒါဆို သင့်မှာသာ ဒီအချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုရင် သင်က သူများထက် ထူးခြားနေတဲ့ သူတစ်ယောက်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နည်းလမ်းရှာဖွေတယ် ဘယ်အရာကိုမဆို အလွယ်တကူ လက်မလျှော့ဘဲ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ပြည့်ဝအောင်လုပ်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေတတ်တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ထူးခြားသူတစ်ယောက်ပါ။ မွေးရာပါ ပြဿနာဖြေရှင်းသူ တစ်ယောက် နည်းလမ်းရှာဖွေပြီးရင် ဘယ်လို အခက်အခဲမျိုးမဆို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ စွန့်ဦးတီထွင်သူ … Read more
မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ထပ်ခြင်း (၁၀) ပါး ဆိုသည်မှာ မြန်မာ့ ဓလေ့ ထုံးတမ်းအရ ထိမ်းမြား မင်္ဂလာ (၁၀)ပါး ရှိပါသည်။ ၁။ ပုဆိုးတန်းတင် ထိမ်းမြားခြင်း သတို့သား၊ သတို့သမီးနှစ်ဦးလုံးကို လူလည်ခေါင်တွင် ကန်တော့ခံ မထွက်ပဲ မိမိအိမ်မှာပင် လွတ်လပ်စွာနေလျှင် ဖိတ်ထားသော ပရိတ်သတ်များ စားသောက်ပြီး ပြန်သွားကြမှ သတိုးသမီး အိပ်ခန်းရှိ ကြိမ်တန်း၊ ကြိုးတန်း၌ သတိုးသား ပုဆိုး၊ ပုဝါ လှန်း၍ တင်ကာထိမ်းမြားခြင်းကို ပုဆိုးတန်းတင် ထိမ်းမြားခြင်း ဟုခေါ်သည်။ ၂။ လက်စုံစား ထိမ်းမြားခြင်း ထမင်း သိုမဟုတ် မုန့်တစ်ခုခု ကို သတို့သား၊ သတို့သမီးတို့က လက်စုံ စားစေ ထိမ်းမြားခြင်းကို လက်စုံစား ထိမ်းမြားခြင်း ဟုခေါ်သည် ။ (ယခု … Read more
သူနဲ့ညားခဲ့ရင် အဆင်ပြေနိုင်၊မပြေနိုင် တွက်ကြည့်နိုင်တဲ့နည်း… ကိုယ်နဲ့ သူနဲ့ ဖူးစာကံ ပါမပါ၊ ပြီးတော့ ဘယ်လိုချစ်ခြင်းမျိုးနဲ့ လက်တွဲသွားကြမယ်ဆိုတာကို လွယ်လွယ်လေးတွက်ပြီး သိမြင်နိင်တဲ့ ဗေဒင်တွက်နည်းလေး ဖြစ်ပါတယ် …။ ချစ်သူမွေးနေ့သက္ကရာဇ် အားလုံးပေါင်းကြည့် ၊ နောက်ဆုံး ရလာတဲ့ကိန်းတစ်လုံးက အဖြေပေါ့ …။ ဥပမာ တစ်ခုအနေနဲ့ ကြည့်ကြရအောင် …။ သင်က 23.4.1991 သင့် ချစ်သူက 14.7.1992 ဆိုပါစို့ …။ သင့်မွေးနေ့ + သင့်ချစ်သူမွေးနေ့ = အဖြေ 23 +4+ 1991 + 14 +7+ 1992 =4031 မွေးနေ့၂ခုပေါင်းထားတဲ့ အဖြေ4+0… Read more
“ဘယ်သူ့မှတောင် မေးစရာ မလိုတော့တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း အတွက် လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀၀)”
“ဘယ်သူ့မှတောင် မေးစရာ မလိုတော့တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း အတွက် လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀၀)” မိန်းခလေးမှန်ရင် သိမ်းထားပါ… 1. မိတ်ကပ် လိမ်းခြယ်မယ်ဆို အောက်ခံ အသားအရည်ကို အရင် ကောင်းအောင် လုပ်ပါ/ 2. မိတ်ကပ်ကို အိမ်မှာနေရင် မလိမ်းပါနဲ့/ 3. မိတ်ကပ်ကို အပြင်သွားပြီး ပြန်လာတာနဲ့ တစ်ခါထဲ ဖျက်ပါ/ 4. မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ နေ့တွေမှာ မျက်နှာကို သေချာ သန့်စင်ပါ ၊မိတ်ကပ်က မျက်နှာသစ် ဆပ်ပြာ တခုသုံးယုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး/ 5. မိတ်ကပ် ဖျက်မယ်ဆို မိတ်ကပ် remover သုံးပြီး သန့်စင်ပြီးမှ မျက်နှာသစ်ပါ/ 6. မိတ်ကပ် remover ကို အလေအလွင့် နည်းအောင် ယနေ့ခေတ် အသုံးများလာကြတဲ့ ready … Read more
အိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ လုံးဝ မပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက် ( ၁၀ ) ချက်
အိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ လုံးဝ မပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက် ( ၁၀ ) ချက် (၁) အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ အိပ်ခြင်း အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ အိပ်စက်သည့်အချိန်သည် သာမန်လူများ အိပ်စက်ချိန်ထက် ပို၍ တိုတောင်းသောကြောင့် သင့်ကို အိပ်ရေးပျက်စေပါတယ်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ အမွှေးများကလည်း သင်၏ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ် ။ (၂) ရေနွေးပူစိမ်ချိုးခြင်း ရေနွေးပူစိမ်ချိုးခြင်းက အိပ်စက်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ထို့အပြင် ရေနွေးပူကို (၁၀)မိနစ်လောက် ပို၍ ကြာကြာစိမ်ချိုးပါက သင်၏ သဘာဝအပေါ်ယံ အရေပြားကို ထိခိုက်စေပါတယ် …။ (၃) စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲခြင်း အိပ်ရာမဝင်ခင် သတင်းကြည့်ခြင်း (သို့) တစ်ယောက်ယောက်နှင့် ရန်ဖြစ်ခြင်းက အိပ်စက်ခြင်းကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ထိုမျှမက အပျော်လွန်ကဲခြင်းသည်လည်း အိပ်စက်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ … Read more